Tena misy ny gadra politika | NewsMada
Par Taratra sur 12/11/2021
Lasa resabe sy mahabe adihevitra ny sasany tato ho ato ny fisian’ny hoe gadra politika na tsia eto Madagasikara amin’izao. Noho ny fangatahan’ny filoha teo aloha iray izay: ny vitan’ny tena no ahina ataon’ny hafa? Na ny fomban’ny tena no heverina ho fanaon’ny hafa koa. Velona ho azy ny fanahiana amin’izany, fanomezan-tsiny, fitsaratsarana ivelany; eny, fanakorontanana aza.
Tsy mahagaga, efa antomotra indray ny fifidianana filohan’ny Repoblika. Atao avokoa izay azo atao rehetra? Sao mba tafaverina eo amin’ny fitondrana; na farafaharatsiny, ny olon’ny tena ahay. Vitan’ny kitsapatsapa toy izany ve ny raharaha? Laingalainga, tena misy ny gadra politika amin’ny hevi-draviny na peta-toko toy izany: gadrain’ny fijery sy ny fomba fanaovana politika… tsy mahafa-bela.
Tsy inona fa ny fiheverana ny mpanao politika ho tsimatimanota: na manao heloka tsotra na heloka bevava aza, heverina sy takina ny famoahana azy fa hoe gadra politika. Laingalainga koa, tena nisy ny gadra politika tamin’ny fitondrana teo aloha: misy ny amoronana antontan-taratasy tsotra izao rehefa manelingelina amin’ny politika, na andrasana kendry tohina amin’izay mety ho fahadisoana ataony.
Mbola izany ve no heverina sy atao amin’izao? Izay ilay hoe ny fanaon’ny tena no ahina ho mety averin’ny hafa. Nefa firifiry ny raharaha momba ny fanodinkodinana volam-bahoaka nafitsoky ny tomponandraiki-panjakana ambony teo aloha? Misy ny manao sesitany ny tenany any ivelany fa tsy sahy miatrika fitsarana, ao ny miandry ny didim-panjakana fampisamborana iraisam-pirenena…
Managadra tena sy manao sesitany ny tenany ho azy amin’ny heviny sy ny ataony efa zary fomba amam-panao ny toy izany? Mihevi-tena ho tsy mba diso amin’ny ataony, na lehibe tsy meloka ka tsy azo enjehina na saziana. Izany ny gadra politika eto? Mila famoahana sy fanafahana amin’ny fomba ratsy, na miatrika mivantana koa ny toe-draharaha eto an-toerana fa tsy be vava fotsiny amin’izao.